Bisad bogsan, Somali Edition of The Healer Cat por Tuula Pere (Tapa blanda) | Peter Books
Somali Edition of The Healer Cat
Sababtoo ah hibada Illaah siiyey,shoobto waa bisad aad looga sharfo deriska. Iyadoo qofka ay ugu jeceshahay ay tahay horjoogada, xiliyada ay firaaqada tahay waxay waqtigeeda ku qaadatay guriga.
Laakiin wax yar kadib waxaa soo galay bakeylihii isagoo weydiisanayaa gargaar. Calaacalka badan darteed bisadii way diidi weysay, waxay dhexmareen dabeylo baraf ah . keyn mugdi dhexdeeda shoobto waxay weji kaweji ola kulantay wax layaab leh iyo waxaa lagu qasbay inay isu keento wixii awoodeeda ah.
Markuu habeenka dheer dhamaado safarka uu dhamaado, cadceedii ayaa soo baxda iyada oo aan qandicineynin keliya keynta xitaa qalbiga bisada daaweysada ah.